SAWIRRO- 5 ciyaaryahan oo soo caayey kooxohoodii hore markii ay ka tageen | Ciyaarside.com
SAWIRRO- 5 ciyaaryahan oo soo caayey kooxohoodii hore markii ay ka tageen
Inta badan wey dhacdaa cayaratooyda qaar kooxahooda marka ay kasoo tagaan inay ku dabaal dagaan hadii ay gool ka dhaliyaan waa marka xumaan lagu kala tago.
Balse waa arin aan badneyn in cayaartooyda kooxaha ay kasoo tageen aflagaadeeyaan weliba meel fagaaro ah.
Sidaa dartee waxaan idiin heynaa 5-cayaaryahan oo caan ah kuwaas oo kooxahoodii hore aflagaadeeyeen markii ay kasoo tageen:
#Neymar: xidigaan xagaagii dhawa PSG waxay €222 million kaga soo iibsatay Barcelona kadibna muran iyo aflagaado ayaa heshiiskan daba socday.
Neymar ayaa kooxdiisii hore Barcelona aflagaado u geestay wuxuuna sheegay 4-tii sano quruxda badneyd ee uu Camp Nou kusoo qaatay in lagu cayaaray sidoo kalena aad uga shaleenayo inuu maaliyada Barcelona soo xirtay iyo maamuulkooda aan ilbaxda ahayn!
#Pepe: 10-sano ayuu Real Madrid la joogay laakiin nasiib xumo xagaagii dhawaa si qaab daran ayuu Madrid kaga tagay wuxuuna si bilaash ah ku aaday naadiga Besiktas.
Pepe wuxuu sheegay in Besiktas taageerayaal cajiib ah leeyihiin kuwaas oo cayaartooyda dhiiri galiyaan halka uu Real Madrid ku tilmaamay taageerayaashooda kuwo kaa rabaan inaa adiga dhiiri galisid oo aan xushmada cayaartooyda aqoonin!
#3 Mario Balotelli – xidigaan Talyaaniga ah waxba uma uusan reebinin kooxdiisii hore Liverpool wuxuuna ku tilmaamay naadigii ugu xumaa ee uu ebid u cayaaray iyo waayihiisii ugu xumaa inuu Anfield kusoo qaatay.
wuxuuna sheegay inuusan marnaba Liverpool jeclaan doonin hadii ay koox kasoo haraan dunida!
#2 Zlatan Ibrahimovic – xidigaan wuxuu weerar ku qaaday kooxdiisii hore Barcelona asigoo ku tilmaamay naadi raqiis ah oo aan mudneyn in loo cayaaro.
Asigoo marka hore sheegay inuu ku riyoon jiray u cayaarista kooxdan balse uu dib kaga qoomameeyay waqtigii uu Camp Nou kusoo qaatay.
#1 Dani Alves – inkastoo uu mudo dheer ka tirsanaa Barcelona hadana markii dambe xumaan ayay Barcelona ku kala tageen.
Alves wuxuu yiri “Waxaan jeclahay in la ii jeclaado, hada jaceyl kuma heesto Barcelona waa inaan ka tagaa oo aan aadaa meel la iiga jecel yahay”
“Waxaan mudanahay jaceyl in la ii siiyo iyo tixgalin balse maamulka iyo taageerayaasha Barca waa labo wajiilayaal oo mudnaantii aan lahaa ma aysan i siinin!”